1. Amapancake empeleni kulula kakhulu ukuwenza. Izithako ezimbalwa kuphela Futhi ayidingi imishini ekhethekile efana ne- Isishayi noma uhhavini futhi Konke okudingayo ipaneli elilodwa loqweqwe lwanele. Namuhla sinendlela yokwenza ama-pancake. Kulula ngokwakho ukushiya omunye nomunye. Ungazama lokhu ekhaya.
2. Izithako zamaPancakes 6. Amaqanda 7. Ubisi olusha 8. Izitophu ezidingekayo ezifana noshokoledi, ujamu wezithelo, uju, amakhukhi, izithelo ezintsha, njll.
3. Hlanganisa izithako eziyinhloko ndawonye, kufaka phakathi ufulawa kakolweni, amalitha ama-2-3, iqanda eli-1, izigaxa ezi-2-3 zobisi olusha, ushukela, kuya ngobumnandi obufunayo. Bese abantu bexubana kahle. Uma ungenaye oshayayo, kulungile. Ingasetshenziswa njenge-ladle yokhuni esikhundleni salokho
4. Okulandelayo, engeza ezinye zalezi zithako, uma zikhona: isigaxa se-vanilla powder sokunambitheka okuncane nephunga, kanye ne-powder yokubhaka ethe xaxa, cishe isigamu sesipuni, esanele ukukhanyisa ipanekuku. Kepha qaphela futhi ungafaki i-powder yokubhaka eningi kakhulu, ngoba lokhu kuzokwenza i-pancake igcwale kakhulu.
5. Vula igesi, setha ipani ngokushisa okuphansi. Faka isipuni esingu-1 samafutha noma ibhotela bese usakaza ibhotela ngentambo kuze kube yilapho usepanini.
6. Lapho ibhotela selincibilikile, sebenzisa iladi noma iladi ukukhipha ibhakede le-pancake esililungisile bese ulithululela phezu kwepani libe yindilinga uma lizothola izingcezu ezi-3-4 enhlanganisweni kafulawa obulungisiwe ngaphambili, kufanele uphume cishe ngo-6. -8 izingcezu, zilungele ukukhonza cishe ezi-2
7. Lapho olunye uhlangothi luphekwe kahle, ungaguqula olunye uhlangothi. Qaphela ungasebenzisi umlilo onamandla kakhulu. Futhi zama ukusetha ipani le- Umlilo uthumela ukushisa ngokulinganayo epanini. Ama-pancake azophekwa ngasikhathi sinye.
8. Faka ipuleti bese uhlobisa nganoma yikuphi okunye okufunayo, noma ngabe ushokoledi, ujamu wezithelo, uju, amakhukhi, izithelo ezintsha, njll. Uhlobo oluhlanganisiwe lumnandi ngokulinganayo!
9. Unjani? Indlela yokwenza ama-pancake ilula kakhulu kunalokho obekulindelekile, akunjalo? Manje, awudingi ukuvumelanisa ikhefi ngoba Ngingazenzela. Ungangeza ama-toppings amaningi njengoba ufuna. Yizame, futhi uzobanjwa. Ukuqala kungahle kuhamba kancane, kepha uma uzama ukukuprakthiza kaningi Ngokuqinisekile sizoqephuza ngokwengeziwe Kuze kube usuku olulodwa uzokwazi iresiphi oyithandayo oyifunayo. Yiziphi izithako nokuthi uzobeka malini Nciphisa uswidi ngendlela othanda ngayo. Izinzuzo zama-pancake akulula ukwenza kuphela. Noma kunjalo jabulela ukunambitheka okusha Ngama-toppings futhi Izintandokazi zethu uBhanana noNutella, ngakho-ke yini oyizamayo futhi yini othanda ukuyidla ama-pancake kakhulu?